Coca i-1 bdm apt kwidolophu yaseRossland ★★★★★ - I-Airbnb
Coca i-1 bdm apt kwidolophu yaseRossland ★★★★★
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguKimberley
Ipholile, ibekwe kakuhle igumbi lokulala elinye kumbindi weRossland edolophini. IWifi, iNetflix, intambo, ukufudumeza, iwasha/isomisi, ikhitshi eligcweleyo, umatshini wokuhlamba izitya, ilinen kunye nebhedi etofotofo kakhulu. Umgama okufutshane wokuhamba kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile. Ungeniso lwabucala ngephedi yamaqhosha. Iivenkile ezi-2 zeebhloko kunye neFlying Steam Shovel Pub yikona yekati kwigumbi lakho. Jonga uphononongo lwethu olukhulu. Zama iRossland Brewery ngesiselo kunye neAlpine Grind yekofu! Ndiyavuya ukukubonisa ngeenxa zonke!
Eli gumbi lihlala liyinxalenye yesakhiwo i-Agnew & Co, i-c1900, ivenkile yokutya kunye nevenkile eyomileyo. Namhlanje, iplaque ibekwe phambi kwesakhiwo kwaye isakhiwo sibhalwe njengesakhiwo sembali eRossland. Ibali lesakhiwo likwiflethi yakho.
IRossland ineendawo zokutyela ezintle kunye nee-pubs kunye neecafe ezimangalisayo. Sinoluhlu apha kuwe. Kwakhona kuninzi okufuneka ukwenze - ufuna ntoni okanye ufuna ukwenza ntoni? Sibuze nje kwaye siza kubona ukuba yintoni esinokukufunela yona! IRossland izele ngabantu abonwabileyo, abafanelekile, abasempilweni, abanoncumo bayo yonke iminyaka! Ulwazi lokuhamba ngebhayisekile/iindlela zokuhamba, iindawo zokutyela, iikhefi njl. Eyona skiing umthi kuMntla Melika kunye neklasi yehlabathi Black Jack Cross Country Course.Best ukuba unemoto nangona kunjalo, sikwicandelo eliphambili laseRossland kwaye ungahamba uye kwiivenkile, i-cafe kunye neeresityu okanye ubambe ibhasi ye-Trail yendawo. Ungaqesha imoto kwiTrail. Sazise xa ufuna amacebiso.
Umbuki zindwendwe ngu- Kimberley
Ngokuncinci okanye ukudibana okuninzi nokuba ubuso ngobuso okanye nge-imeyile.